China Kujekesa Mumiriri BT-9805 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
BT-9805 ndeye yakakwira kuita uye sorbitol yakavakirwa kujekesa mumiririri ine kemikari zita reDMDBS, ndeyechizvarwa chechitatu.
Kujekesa Mumiriri BT-9805iri yepamusoro yekuita sorbitol yakavakirwa pachizvarwa chechitatu (DMDBS) uye inogona kudzikisira husi uye inowedzera kujekesa kwepolypropylene kuburikidza neiyo nucleation yeiyo polymer. Izvi zvakare zvinotungamira kuwedzera kupisa kupisa, kuwedzera kuomarara kwechikamu chakaumbwa uye kupfupisa kutenderera nguva panguva yekuumba maitiro. Iyo haina hwema uye yakanakira chikafu chekubata kunyorera. Rudzi urwu rwezvigadzirwa zvemafomura akadaro akagamuchirwa neDFA inobvumidzwa kushandiswa mukudyidzana kwechikafu munyika musika.
Kujekesa Mumiriri BT-9805 inogona kushandiswa mukugadzira Mask zvinhu, inogona:
Simbisa kujekesa kwePP.
Simbisa kupenya kwePP yakanyungudika-yakaputirwa jira.
Ndiwedzere kuoma, rova ​​nemishonga PP yakanyungudika-vakaridza jira.
Natsurudza indekisi yekunyungudika kuti usangane nezvinodiwa nemachira akanyungudika.
Uchishandisa BT-9805, vashandisi vanogona kunongedza kuwedzera kuPP zvinhu zvekugadzira zvigadzirwa zvakapera, PP yakajeka masterbatch uye yakajeka PP. Pane zvakawanda zvinogadzirwa zvinogona kugadzirwa zvinosanganisira imba yekuchengetera, masosi ekuchengetera, mikova yeingei yakatetepa, midziyo yakatetepa-yemadziro uye majekiseni anoraswa uye kujekesa mabhodhoro epurpropylene anoputirwa emabhodhoro emishonga, zvinonhuwira, majusi, sosi, mavhitamini, uye mabhodhoro evana nezvimwe.
Nyukireya mumiririri rudzi rwekuwedzera urwo rwunokodzera mapurasitiki asina kukwana akakwana akaita se polypropylene uye polyethylene. Nekuchinja iko crystallization maitiro einesi uye nekumhanyisa iyo crystallization chiyero, inogona kuzadzisa chinangwa chekupfupisa iyo yekuumba kutenderera, kuwedzera kujeka kwepamusoro gloss, kuomarara, kupisa kwemafuta kupisa, tensile simba uye kukanganisa kuramba kwezvakapedzwa zvigadzirwa.
Polymer yakagadziridzwa na Nyukireya mumiririri, Haingochengetedze chete maitiro epakutanga epolymer, asi zvakare ine nani kuita mutengo chiyero pane zvakawanda zvinhu zvine yakanaka yekugadzirisa mashandiro uye hwakawanda hwekushandisa. Uchishandisa Nyukireya Mumiriri muPP haingoshandise girazi chete, asi zvakare kutsiva mamwe ma polymer akaita sePET, HD, PS, PVC, PC, nezvimwewo pakugadzira kurongedza chikafu, kurapa kwekushandisa, chinyorwa chetsika chekushandiswa kwemazuva ese, kujekesa kuputira uye zvimwe zvepamusoro giredhi tafura.
Pashure: Kujekesa Mumiriri BT-9803M
Zvadaro: Kujekesa Mumiriri BT-9803